देखेको १० दिनमा नै पूरा हुन्छन् यस्ता सपनाहरु, हेर्नुहोस् के भन्छ शास्त्रले ! – Khabar Silo
सपनामा यी चिज देख्नुलाई हितकारी मानिन्छ : सपनामा पर्वत, हात्ती, घोडा, गोरु आदिमा सवार गरेर हिडेको देख्नुलाई शुभ मानिन्छ ।
आज बिहिबारको दिन के गर्दा शुभ फल मिल्छ जानी राखौ
बिहिबारलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहिबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने मानिन्छ । तर बिहिबार केही काम गर्न भने निषेध गरिएको छ ।शास्त्रमा बिहिबार कपाल नुहाउन नहुने उल्लेख छ । खासगरी महिलाहरुले बिहिबार कपाल नुहाउनु अशुभ मानिन्छ ।बिहिबारको दिन कपाल […]
आज शनिबार शनिदेवको पुजा किन गरीन्छ ? (हेर्नुहोस् पूजा विधी तस्विर सहित)
धार्मिक ग्रन्थहरुमा शनिबारलाई विशेष दिनको रुपमा मान्ने गरिएको छ । ब्रहमान्डलाई नौ ग्रहहरु को रूप मा वर्णित गरिएको छ । यी नौ ग्रहहरूमा, शनिलाई न्यायाधीश मानिन्छ ।शनि सूर्य भगवानको पुत्र हो र मकर कुकुरको मालिक हो। हरेक हप्ता शनिमा तेल दान गर्ने परम्परा रहँदैं आएको छ ।ज्योतिषका अनुसार, शनिदेवलाई खुशी पारेर तपाईले आफ्नो जीवनमा नयाँ […]